लेख Archives - Page 31 of 31 - कृषि पत्रिका
कृषि प्रधान मूलुकमा खोई लगानी ?
संजय श्रेष्ठ आइतबार १७ कार्तिक, २०७६
नेपाल कृषि तथा पशुपालनमा जीविकोपार्जन गर्दै आएको मुलुक हो भन्ने कथन छ । नेपालको कुल ६५.५ प्रतिशत जनसंख्याले आफनो दैनिकी खेतीपाती र पशुचौपायासँग बिताउँदै आएको छन् । आर्थिक समृद्धि र आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास नेपालीले कहिले सम्ममा पाउलान्, त्यो त अझ आकाशको फल नै हो । कथामा सीमित कृषिप्रधान देशले आधारभुत आवश्यकता र ज्यान बाँच्न […]
राजन कटुवाल क्षेत्री मङ्गलबार ०३ बैशाख, २०७६
भर्खरै कृषि स्नातक अध्ययनको लागि प्रवेश परिक्षामा नाम निस्किएको विधार्थीको फोन बज्छ। उसलाई अनेकौं विधार्थी संगठनहरुले आफ्नो संगठनमा आउन लोभलालच, आश्वाशनका साथै धम्कि सहितका फोन आउँछन, उसलाई दिक्दार लाग्छ । उसलाई आफ्नो संगठनमा लैजान संगठनहरुबिच हानाथाप चल्छ, एकअर्काको टाउको सम्म फुटाउन पछि पर्दैनन् । उसलाई भिआइपि झै व्यवहार भएको देख्दा आफै छक्क पर्छ ।अन्त्यमा ऊ […]
एउटै माछाले बनाइदियो लखपति
शनिबार ०२ भदौ, २०७५
एजेन्सी। भारतको मुम्बईमा माछा मार्ने पेशा गर्दै आएका दाजुभाई एउटै माछा बेचेर लखपति भएका छन् । महेश मेहर र उनका भाइ भरत गत शुक्रबार अन्य दिनसरह नै माछा मार्नका लागि समुद्रमा गएका थिए । आफ्नो सानो डुंगामा माछा मार्न निस्किएका उनीहरुले जाल थापे । जाल भारी भएपछि उनीहरुले माछा फसेको अनुमान गर्दै जाललाई तान्न थाले […]
थोपा सिंचाइ के हो ?
मङ्गलबार १५ फागुन, २०७४
थोपा सिंचाई प्रविधि भन्ने बित्तिकै इजरायलको नाम लिने गरिन्छ । तर नेपाल आफैंले पनि थोपा सिंचाई प्रविधि विकास गरेको छ भन्ने धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ । विदेशी प्रविधि भित्रिनु अघिदेखि नेपालले थोपा सिंचाई प्रविधिको विकास र विस्तार गरेको थियो । थोपा सिंचाईका अनुसन्धानकर्ता राजन गैरे नेपाली थोपा सिंचाई प्रविधिका जन्मदाता हुन् । लामो सयमसम्म आइडिई […]
“युवा लक्षित कार्यक्रमलाई थप आर्कषण गर्ने लक्ष्य राखेका छौं”
डा. रामकुमार कार्की प्रमुख जिल्ला पशुसेवा कार्यालय , चितवन गतवर्ष चितवनको पशुपालन क्षेत्रमा के कति अनुदान वितरण गर्नुभयो र अनुदानको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो ? हामीले युवा लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत २०७३/२०७३ मा ३३ लाख अनुदान बितरण गरेका छौं ।जसमा ३० भन्दा बढी गाई पाल्ने ठुला उत्कृष्ट गाइपालक कृषकहरुलाइ ४ लाख, मझौला २० देखि २९ सम्म पाल्ने […]
ब्यबसायिक पशुपालन क्षेत्रलाइ राज्यले हेरेन भने पशुलाई सिंहदरबारमा लगेर छोड्छौ
आनन्दप्रसाद न्यूरे अध्यक्ष राष्ट्रिय व्यवसायिक पशुपालन तथा दुध उत्पादक कृषक समाज, नेपाल ० राष्ट्रिय व्यवसायिक पशुपालन तथा दुध उत्पादक कृषक समाज ,नेपाल के हो ? नेपालका ७० प्रतिशत जनता कृषिमानिर्भर छन् । त्यसमा ३३ प्रतिशत कृषकलाई आफ्नो उत्पादनले तीन महिना खान पुग्दैन, त्यस्तै ३३ प्रतिशत कृषकको आफ्नो उत्पादनले ६ महिना खाना पुग्छ । १७ प्रतिशत […]